Tilmaamaha Safarka Antalya Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Tilmaamaha Safarka Antalya Halal
Antalya waa magaalada ugu weyn ee ku taal xeebta badda Mediterranean-ka ee Turkiga, waana mid ka mid ah xarumaha laga helo waxa loogu yeero Turkish Riviera.
Ku saabsan Antalya
Mach marina iyo qayb ka mid ah magaaladii hore ee Antalya
Markuu goobta soo galay sanadkii 150 BC ka Attalia, oo loogu magac daray aasaasihiisii, Attalos II, oo ahaa boqorka Pergamon, Antalya waligeed waxay soo jiidatay dad badan oo safar ah, oo ay ku jiraan Bawlos Rasuulkii, iyo Ibnu Battuta iyo kuwo kale. Antalya waxay beddeshay Phaselis - burburka quruxda badan oo hadda jiifa koonfurta magaalada, inta u dhexeysa Kemer iyo Olympos - oo ah dekadda ugu weyn ee gobolka ku xeeran xilligii xukunkii Seljuks, horraantii 1200 -meeyadii, laakiin la'aanta dhul -weyne weyn (ama, halkii, xiriir la'aan wanaagsan oo leh buuraleyda buuraleyda ah) waxaa loola jeedaa in badan oo taariikhdeeda ah tan iyo markii ay ahayd magaalo xeebeed gobol ah, in kasta oo ay la jireen bulsho dhaqamo badan oo Muslimiin, Masiixiyiin, iyo Yuhuud ah. Iyada oo ah Xarunta gobol leh xeebo qurux badan, buuro cagaar ah, iyo tiro maanka ku haysa burburka qadiimiga ah, maalgelinta dalxiisku waxay bilaabantay 1970 -yadii, taas oo wax badan ka beddeshay masiirka magaalada, si kastaba ha ahaatee inta badan booqdayaasha (ha khaldamin - waa in ka badan malaayiin sanadkiiba) ilaa gobolka ayaa dhab ahaantii ku jira baakadaha fasaxa “loo dhan yahay” maalmahan, waxaa isla markiiba laga qaadaa garoonka diyaaradaha oo loo qaadaa goobaha waaweyn ee ku teedsan xeebta boqolaal kiilomitir, halkaas oo ay joogaan ilaa dhamaadka fasaxyadooda marka laga reebo duulaanka ama laba meelood oo ugu dhow iyo soojiidashada ugu caansan, sidaa darteed Antalya lafteeda, badiyaa magaaladii hore (Old City), waa in badan oo ka mid ah meelaha socdaalka madaxbanaan, halkaas oo aad kula kulmi doontid socdaalka kale ee maskaxda la midka ah, iyo dadka deegaanka ah.
Qiyaastii Abriil, marka aad si dhammaystiran u heli karto qorrax-dhac oo cimiladu aad uga sii dulqaadasho badan tahay bilaha xagaaga, waa mid ka mid ah xilliyada ugu wanaagsan ee la booqdo magaalada.
Antalya waa garoonka diyaaradaha ugu dhow, oo ay ka shaqeeyaan duulimaadyo rakhiis ah oo ka yimaada Istanbul (ugu yaraan US $ 50, ballansashada hore ayaa sidoo kale loo heli karaa qiimo hoose.)
Diyaarad ugu raac Antalya
Madaarka Antalya. Waxaa u adeegi jiray tiro la yaab leh oo duulimaadyo ah oo ka yimid dhammaan Yurub oo dhan - xitaa garoomada diyaaradaha oo aad u yar - Tani waa si fudud habka ugu caansan ee lagu tago magaalada. Terminal 1 iyo terminaalka maxalliga ah waxaa u adeega Antray (kaliya qaado tareen kasta oo leh "Havalimani" ama ku bedel mid ka mid saldhigga ugu dambeeya intaanay khadadka u kala bixin) laakiin Terminal 2 maahan mana jirto hab fudud oo aan ka aheyn wicitaanka taksi si aad u kala guurto boosteejada. Terminal 2 waxaa ka shaqeeya khadka basaska dadweynaha ee 600 kaas oo taga nus saac kasta oo u adeegta labada boosteejo.
Ahaanshaha 10 kiiloomitir magaalada u jirta Antalya, Madaarka Antalya () (Havalimanlı) waxay u adeegtaa duulimaadyada charterka ee ay ka buuxaan kuwa ciidaha sameeya. Duulimaadyada u adeega Antalya waxaa ka mid ah: Pegasus, Transavia.com (lowcost iyo charers ka Netherlands, France iyo Denmark), AtlasJet (duulimaadyo gudaha ah), SunExpress (tobaneeyo duulimaad oo ka kala yimid Yurub oo dhan), Turkish Airlines (duulimaadyo badan oo ka yimaada Ankara iyo İstanbul -Atatürk), Aeroflot (duulimaadyo maalinle ah oo ka yimaada Moscow-Sheremetyevo), Ukraine International Airlines (dhowr duulimaad oo isbuucii laga bilaabo Kiev). Ingiriiska sidoo kale waxaa matala shirkado badan oo charter ah sida Thomas Cooks iyo Airtours.
Taksi raac inta u dhaxaysa madaarka iyo Xarunta Magaalada dib kuu celin doonaa € 15 (45 TL) inta lagu jiro maalinta (Maarso 2011). Waxaad sidoo kale doorbidi kartaa shirkadaha wareejinta si aad uga fogaato wax isdabamarin kasta. Kuwa kale, xulashooyin badan oo saaxiibtinimo u leh gaadiidka garoonka diyaaradaha ayaa ka mid ah Havaş basaska, kuwaas oo ka raqiisan oo ku soo noqnoqda; waxay ka amba baxaan saacada "Güllük PTT" (10 TL).
Waxaa jira basaska dadweynaha ka imanaya garoonka diyaaradaha (khadka 600, "Terminal-Otogar") kaas oo baxa saacadda oo ku kacda 4 TL. Basaska ka socda otogar orod wada Adnan Menderes Blv iyo Mevlana Cd (meesha saxda ah ee joogsiga basaska waxaa laga heli karaa Khariidadaha Google).
Si aad bas bas ah uga raacdo Terminalka Caalamiga ah waa inaad tagtaa maxalliga maxalliga ah (300 m, kaliya u leexo midig markaad ka baxdo Terminalka Caalamiga ah); waxaa jira astaan ​​yar oo buluug ah "D" oo ku ag taal geed weyn oo ficus ah. Waxaa jira astaan ​​kale oo buluug ah oo “D” ah oo ku ag taal istaagga taksiga ee hor yaal Terminalka Caalamiga ah oo aan meelna ku gaadhsiin doonin; sugitaanka halkaas ayaa badanaa soo jiidata wadayaasha tagaasida (adiga oo runta kuu sheegaya, "Ma jiro bas halkan ka tagayaa!") oo bixiya raacitaan. Marka laga soo tago, waxaad sameyn kartaa horay u sii sii ballansasho wareejinta garoonka diyaaradaha antalya ee shirkadaha taksiyada gaarka loo leeyahay.
Tareenka AntRay wuxuu ku xiraa magaalada gudaha iyo garoonka diyaaradaha. Magaaladii hore waa inaad uga tagtaa Ismetpasa. Waxaad sidoo kale toos ugu sii socon kartaa saldhiga basaska (Otogar). Qiimuhu waa 4 TL (2016).
Saldhigga weyn ee basaska ee Antalya wuxuu ku yaal meel qiyaastii 6 km waqooyi-galbeed ka xigta bartamaha magaalada, laakiin si fudud ayaa loo gaaraa iyadoo la adeegsanayo taraamka ka degga saldhigga Otogar, oo loo socdo 10 daqiiqo otogar. Taksi laga raaco Kaleiçi ilaa otogar wuxuu ku saabsan yahay 40 TL (Nofeembar 2017). Masaafada udhaxeysa istaanka baska iyo istaanka taraamka ayaa xoogaa fog hadii aad boorsooyin badan heysato calaamadaha ayaa umuuqda inay kuu diraan wadada dheer laakiin dariiqa amaanka dartiis ma jirto wado ka gaaban. Wax yar ka hor intaan safarku dhicin xafiiska tigidhada shaqaaluhuna badanaa waxay ku hadlaan Ingiriis.
Nidaamka basaska Turkigu waa mid dhameystiran waxaadna ka heli kartaa meel kasta oo aad rabto. Kafiican inaad kubixiso waxyar oo liras ah waxaadnaheleysaa safar lama ilaawaan ah. Ulusoy waxay leedahay basas leh kuraas u eg heerka ganacsiga ee diyaaradaha. Waxa kale oo jira shirkado basas kale, oo ay ka mid yihiin Kamil Koç, Truva iyo Varan. Shirkadaha qaar waxay leeyihiin markab WLAN ah. Hubi otobusbileti soo bandhigida qiimaha tikidhada basaska laga bilaabo Antalya ilaa 81 magaalo oo Turkiga ah.
Qiimaha waa yaryahay. Kaliya iska xaadiri baska (otogar) oo ku dhawaaq halkaad u socoto.
Waxaa jira basas joogto ah oo loogu talagalay Antalya oo mara hareeraha waddooyinka xeebta oo istaaga magaalooyinka dalxiiska sida Kaş iyo Fethiye, in kasta oo kan dambe si dhakhso leh loo gaaro (3½ hr halkii 5-6 saac) iyadoo la adeegsanayo bas toos ah oo aan ku sii jeedin waddada xeebta ah. .
Saldhiga basaska waxaad ka raaci kartaa baska deegaanka ama Tramka (Antray) magaalada ama garoonka diyaaradaha. Waxaa jira calaamado muujinaya taraamka (oranaya midkood "Antray" ama "Tramvay"), laakiin waa xoogaa lugayn ah, qaybta ugu dambeysaana waxay maraysaa marin dhulka hoostiisa ah. Mahadsanid wakiilka tigidhada ayaa caadeystay la macaamilka shisheeyaha iyo helitaanka tigidhka taraamka waa inuusan noqon caqabad aad u weyn.
Safar doon ugu raaca Antalya
Inta badan socdaalayaashu waxay ka yimaadaan Marmaris iyagoo ka yimaada Rhodes, Griiga, ka dibna baska ka raaca. Waxa kale oo aad doon ka raaci kartaa Kastellorizo, oo ah jasiirad yar oo Griig ah oo u dhow tuulada kalluumeysiga ee Kas.
Tareen ku raac Antalya
Basasku waxay ka baxaan Antalya ilaa Konya (300 km, 5 saacadood) si ay ula xiriiraan tareenada xawaaraha sare ee YHT ee Ankara (90 min), Eskisehir (90 min) iyo Istanbul Pendik (3 hr 30 min). Pendik waa iska sahlan tahay garoonka diyaaradaha Sabiha Gokcen (), laakiin gaaritaanka bartamaha Istanbul waxay qaadataa 90 daqiiqo oo kale metro iyo bas. Marka marka la barbardhigo baska jidka oo dhan, baska iyo tareenku waxay si dhakhso leh ugu socdaan Ankara iyo isla waqtigaas ilaa Istanbul. Waxaa sidoo kale jira xiriirro tareennada aada magaalooyinka kale ee Turkiga, sida Izmir, Kars iyo Adana. Kuwani way gaabis yihiin waqtiyada ugu fiican waxaana carqaladeeya shaqada injineernimada, ugu yaraan illaa 2018: ka eeg bogga Ankara faahfaahinta.
Antalya waxay bixisaa noocyo kala duwan oo gaadiidka dadweynaha ah, sida basaska dadweynaha, taraamyada, basaska yaryar, tagaasida iyo dolmuş.
Qiimaha baska iyo taraamka kaliya waa 2.75 TL (Nofeembar 2017) laakiin laguma bixin karo lacag caddaan ah. Qiimaha waxaa lagu bixiyaa Antalyakart. Waxaa jira kaar balaastig ah oo dib loo buuxin karo, iyo kaar warqad oo la tuuri karo ah, oo laga heli karo kiishaska ku teedsan wadada weyn ee loo yaqaan 'AntRay tramway', dukaamada hareeraha saldhigyada, ama miisaska gaarka ah ee AntRay (tusaale ahaan, Otogar). Haddii aadan hubin, kaliya weydii ilaalada saldhigga waxtar leh. Kaarka dib loo buuxin karo wuxuu ku siinayaa qiimo jaban oo ah 2 TL. (Abriil 2018)
Darawallada Tramway-ka Heritage waxay iibiyaan Antalyakart la tuuri karo 12 TL (Nofeembar 2017), oo ku siinaysa afar jeer oo keliya, oo hal qof ama in ka badan ay isticmaali karaan markiiba.
Kaarka balaastigga ah ee dib loo buuxin karo wuxuu bixiyaa qiimo jaban.
Antalya waxay leedahay laba, khadadka tareenka fudud ee la jaray, mid casri ah iyo mid si ula kac ah loogu sameeyay muuqaal duug ah inkasta oo saldhigyada khadadka dhaxalka ee u dhow magaalada hore ay masaafad dhaqso leh ugu jiraan kuwa kale.
The Dhaxalka Heritage waxaa ku deeqay magaalada Nuremberg ee Jarmalka waxayna isku xirtaa galbeedka Konyaalti Beach iyo Matxafka Antalya ilaa bariga bartamaha magaalada. Waxay socotaa 30 daqiiqo kasta jiho kasta. Wadadan taraafikada waxaa loo isticmaali karaa indho indheyn maadaama ay dhaafayso meelo qurux badan oo ku yaal bartamaha magaalada.
The Wadada weyn ee loo maro 'AntRay' wuxuu ka kooban yahay hal saf, oo u adeegaya wadada Fatih-Otogar-Muratpaşa-Ismetpaşa-Meydan 15kii daqiiqo ee kasta inta lagu jiro maalinta (Juun 2015), taraamyada qaarna waxay kusii socdaan garoonka diyaaradaha (Havalimanlı) ama goobta Expo 2016. Si aad u tagto Kaleiçi ama ku xirnaanta khadka taraamka taariikhiga ah, ka deg saldhigga Ismetpaşa. Si aad uga baxdo boosteejada baska ee Kaleiçi, raac taraamka dhanka jihada Fatih, ka degto Otogar, oo raac calaamadaha 10 daqiiqo. Hubi OpenStreeMap goobta khadadka taraamka iyo joogsiyada.
Antalya, basasku waxay uga gudbaan meel kasta oo ay aadaan meel kasta oo magaalada ah. Qiimaha jaban waa basas badankood waxay bixiyaan qaboojiye iyo TV xitaa jidadka gaagaaban. Si aad ugu safarto meelaha fog fog waxaad u baahan kartaa inaad marka hore u safarto boosteejada baska. Saldhigga basku wuxuu leeyahay basas u gaar ah oo leh karbaash buluug ah oo kala duwan. Gegida basaska ee magaalada ilaa safarka garoonka diyaaradaha (Wadada Basaska ee 600, "Terminal-Otogar") waa suurtagal 30 daqiiqo kasta (2016).
Waxaad ka raadin kartaa magacyada waddooyinka khariidadaha Google oo ay ku jiraan meesha basku istaago.
Waxaa qoray dolmuş
La buuxiyay macno ahaan waxaa loola jeedaa "buuxi". La buuxiyay waa cab weyn, gaari xamuul, tagsi joogto ah ama bas yar oo ku socdaala waddo cayiman. Inta badan xarumaha waaweyn ee gaadiidka dadweynaha waxay leeyihiin a buuxsami saldhigga, halka aad kaliya ka fadhiisan karto meesha buuxsami taas oo ku socota wadada aad rabto. Magaalada Antalya buuxsami ma sugo ilaa ay buuxiso. Taabadalkeed, waa la qorsheeyay, hase yeeshe haddii ay madhan tahay buuxsami tartiib tartiib ah ayuu u dhaqaaqi doonaa isagoo rajeynaya inuu helo rakaab badan. Weli waa inay ilaalisaa jadwalkeeda wax badanna ma joojin karto.
Magaalada waxaa ku yaal boosteejooyin tagaasida oo darawallada ay ku leeyihiin saldhiggooda iyo dherigooda shaaha. Taksi kasta waa la cabiray waxaana jira laba qiime oo kala duwan. Meelaha caanka ah ee caanka ah waxaa ku yaal liisas qiimeyn ah oo muujinaya heerka euro. Qiyaasta cadaaladdu waa qiyaastii 2.4 TL kiiloomitir.
Waxaad sidoo kale la gorgortami kartaa darawal kasta oo taksi si uu kuu noqdo hagaha socdaalkaaga gaarka ah. Sidoo kale waa inaad bixisaa lacagta gaaska. Ikhtiyaarkan wuxuu noqon karaa mid qaali ah laakiin haddii aad lacag hayso, waa u qalantaa! Waxaa jira ikhtiyaar ah in lagu dalbado taksi khaas ah oo laga wareejiyo garoonka diyaaradaha Antalya.
Kirada baabuurta waxaa laga heli karaa boosteejada baska, dekedda hawada iyo bartamaha magaalada. Waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin baabuur si aad uhesho bartamaha magaalada (gaar ahaan Cumhuriyet, Atatürk, jidadka Isiklar, Wadada Sarampol iyo magaalada qadiimiga ah), maxaa yeelay waxaad heleysaa baarkin gawaari ah iyo sida ay dadka u wadaan (mararka qaar waxaad dareemeysaa inaad kujirto wadada orodka) noqo mid adag. Hubso inaad u hogaansanaato xayiraadaha aan dhigan gaariga, degmada ayaa aad uga adag arrintaas. Waxaa jira calaamado caga-dhigasho ah oo ku saabsan waddooyinka si ay u caawiyaan safrayaasha. Sidoo kale inta badan dhalinyarada deegaanka waxay yaqaanaan Ingiriisiga way ku farxi doonaan inay kaa caawiyaan meesha aad u socoto. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa khariidada magaalada miisaska macluumaadka dalxiiska ee ku yaal bartamaha magaalada.
Ugu safro baaskiil magaalada Antalya
Isticmaalka baaskiilka waddooyinka ciriiriga ah waxay noqon kartaa mid khatar ah oo daal badan (inta badan xagaaga maadaama heerkulku gaaro 40s ° C duhurkii (100-120 ° F), hase yeeshe waxaa jira wadooyin yar yar oo baaskiil ku socda oo maraya badda agteeda iyagoo leh aragtiyo aan caadi ahayn.
Maxaa lagu arkaa Antalya
Albaabka Hadrian, oo ka mid ah irdaha ku yaal derbiyada magaalada qadiimiga ah ee Antalya (Old City)
Antalya waxay hodan ku tahay taariikhda iyo farshaxanka.
Rubucii hore, Old City, wuxuu leeyahay jidad cidhiidhi ah, oo leexleexan oo lagu xiray darbiyada magaalada qadiimiga ah, kuwaas oo hadda ka ilaaliya rubuca nabada buuqa magaalo weyn oo la taaban karo oo milyan milyan ah In kasta oo ay jiraan irrido kale, waxaa ugu wanaagsan in la galo oo laga baxo rubucii hore ee soo jiidashada lahaa Albaabka Hadrianus, oo uu dhisay boqorkii Roman-ka ahaa ee Hadrianus oo ahaa marinka laga soo galo magaalada.
Waxaa jira wax weyn Matxafka qadiimiga ah iyo fara badan dhismayaasha taariikhiga ah iyo Burburkii hore ku dhow.
Aspendos (qadiimiga Roman amphitheater) (Ka soo qaado wadada D400 bariga Antalya, ka dibna 07-04 waqooyi ka dib Serik). Amphitheater-ka Rome oo sifiican loo ilaaliyay ilaa nus-saac Antalya. Goobta waxaa ku jira burbur kale oo qadiimi ah.
Aquarium -ka Antalya, Dumlupınar Bulvarı Arapsuyu Mahallesi No 502, Konyaaltı (Baska 56 wuxuu istaagayaa aquarium-ka agtiisa, ama tagsi kaga tag otoga (qiyaastii 20 TL)). US $ 40. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Tünek Tepe. Makhaayad dusha sare / makhaayad ku taal galbeedka Antalya, oo siineysa aragtiyo qurux badan magaalada iyo xeebta labada dhinacba. Gaari fiilo leh (Teleferik) ayaa la furay 2017, wuxuu ka soo qaadayaa martida saldhig ku dhow dekedda isla goobta. Waxaa jira baarkin badan oo gawaarida ah oo kuyaala halka laga raaco gawaarida (waa 5 TL). Sidoo kale waa suurtagal in la kaxeeyo buurta dusheeda, laakiin baarkin dhigashadu waxay noqon kartaa dhibaato. Tünek Tepe dhab ahaan kuma jiro radar-dalxiis, markaa way aamusnaan kartaa. Cunnooyinka laga cunteeyo ee ku jira makhaayada ayaa ku qoran af Turki oo keliya. Makhaayada kore ee wareegaya waxaa dib loo hagaajiyay xagaagii 2017. 15TL. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xadiiqadda Dabiiciga ee Kurşunlu Waterfall (Waqooyiga-bari ee Antalya wadada D685.). Xadiiqad qurux badan oo leh biyo dhacyo waaweyn. Waxaa jira dariiqa la taaban karo / dhagaxa goobta oo kaa qaadi doona dhammaan waxyaabaha ugu fiican. Kuma haboona waayeelka / dadka naafada ah. Waxaa jirta fursad lagu qoyn karo biyo-dhaca. Balliyada dhexdeeda, waxaad ku arki kartaa kalluun iyo qoolley. Meel u dhow albaabka laga soo galo waxaa ku yaal cooshado iyo makhaayad fiican / makhaayad u dhow jidka. 6TL. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waxa lagu sameeyo Antalya
Masaajidka Tekeli Mehmet Paşa.
Inta badan dhismooyinka taariikhiga ah ee Antalya waxaa laga heli karaa hareeraha jidadka cidhiidhiga ah ee Kaleiçi, rubucii hore. Meelaha taariikhiga ah, dhismaha iyo meelaha qadiimiga ah ee xusuusta leh waxaa ka mid ah: Yivli Minaret, Karatay Medresesi, Hıdırlık Tower, Ahi Yusuf Mescidi, Masjidka Iskele, Murat Paşa, Tekeli Mehmet Paşa Mosque, Balibey Mosque, Musellim Mosque, Seyh Sinan Efendi Mosque, Hadrian Arch, iyo Tower-ka saacadda. Dhismayaal badan ayaa dib ugu laaban xilligii Hellenistic. Sidoo kale Matxafka 'Antalya Museum' wuxuu leeyahay ururinta qaddiimiga ah ee caanka ah.
Ku soco oo ku qabooji Karaalıoğlu Park ama kaluumeysatada ku fiirso Harborka wanaagsan ee Yacht
Ku dukaamee suuqyada waaweyn; Terracity, 5M Migros, Özdilek iyo Deepo Outlet Center.
Buurta Tünektepe, oo dhererkeedu yahay 618 m / 2009 ft, galbeedka magaalada waxay leedahay muuqaal qurux badan oo Antalya ah. Dusheeda, waxaa ku yaal hudheel, makhaayad meertada ah, iyo caweys, in kasta oo naadigu u furan yahay xaflado gaar loo leeyahay oo keliya.
Waxaad ka dalxiis tagi kartaa xeebta badda Mediterranean-ka doonyaha ku xiraya dekedda. Ka soo qaad in qiimaha saxda ahi yahay kala bar qiimaha ugu horeeya ee lagu siiyo. Ha rumaysan damaanad qaadkooda ah in doontu isla markiiba baxeyso — doontu way baxaysaa markii milkiilayaashu u maleeyaan inaysan jirin fursad macquul ah oo rakaab badan lagu qancin karo inay raacaan. Maraakiibta dalxiisyada ee subaxda ayaa ka daganaan badan safarada galabta.
Wax ka iibsiga Antalya
Xusuusta caadiga ah waa kilim, indho buluug ah, dhar nashqadeeye been abuur ah, kabo, dhir udgoon, dhuumaha biyaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Haddii aad dareento baahi loo qabo inaad soo booqato xarun ganacsi oo casri ah, Terracity Mall oo ku sii jeedda magaalada Lara ayaa leh dhammaan dukaanno naqshadeeyayaal caalami ah oo aad jeclaan lahayd. Xitaa waxaa jira supermarket casri ah iyo ganacsade doon doon ah.
Farmashiyaashu waxay iibiyaan inta badan daawooyinka dhakhtarku qoro oo gabi ahaanba sharci ahaan laga iibsado miiska iibka iyo qiimo jaban. Noocyo badan oo hiddo-wadaha ah (daawooyin ay kujiraan isla wakiilka daawada summada, laakiin shirkadaha aan la aqoon) ayaa sidoo kale la heli karaa. Kuwa ugu iibinta fiican waxaa ka mid ah Viagra, Prozac, Ventolin, Xenical, kaniiniyada kala duwan ee ka hortagga uurka iyo antibayootigyada.
Erey xasuusin ah
Dhoofinta waxyaabaha qadiimiga ah ama walxaha loo arko inay tahay mid si adag loo mamnuucay isla markaana sababi doonta dhibaatooyin fara badan oo aan lagu odhan ganaaxyo culus kuwa la qabtay markay dalka ka baxayaan Haysashada iyo suurtagalnimada xitaa ganacsiga Turkiga waa sharci - dhoofinta waa la mamnuucay. Iska ilaali oo ha aaminin iibiyeyaasha kuwaas oo isku dayi kara inay kaa dhaadhiciyaan waxa ka soo horjeedka ah. Sidoo kale, kastamka guryaha dib ayaa loogu bartilmaameedsadaa alaabooyin badan oo been abuur ah sida fiidiyoowga, CD-yada, kabaha, saacadaha iyo wixii lamid ah. Fursadaha in lagugu qabto ayaa aad u yar, laakiin waa inaad ogaataa inaad ku sii socoto dhul aan sharci ahayn.
Xagee laga cunaa Antalya
Cunto makhaayad ayaa caadi ahaan dib kuu dhigeysa qiyaastii 7 ilaa 20 TL (saxanka caadiga ah wuxuu noqon doonaa ilaa 12 TL). Adeeggu waa mid la yaab leh, oo kaliya waxaa ku habboon saaxiibtinimadiisa dhabta ah. Waxaa sidoo kale jira makhaayado cunno cunno wanaagsan leh. Dabcan cuntada badda iyo makhaayadaha qurxoon ayaa ka qaalisan. Hal digniin oo ah in laga feejignaado ayaa ah in la hubiyo in qiimaha la soo xigtay uu la mid yahay qiimaha ku qoran liiska.
Haddii aad miisaaniyad ku jirto waad qadarin doontaa meheradaha cunnada degdegga ah ee degdegga ah ee koonfurta Muratpaşa, halkaas oo digaag laga heli karo dürüm laga bilaabo 2.5 TL.
Makhaayada Cunista Fiican ee Seraser, Tuzcular mah. Karanlik sok. Maya: 18 Kaleici / Antalya,, fax: + 90 242 241 1981. 15: 00-01: 00.
MCYörüks, Wadada Atatürk 68 (Waxay ku taalaa inta udhaxeysa Işıklar iyo Karaoğlan Park). Makhaayad fasal-dhexaad ah oo ku taal Bartamaha Magaalada oo u adeegta suxuunta iyo aalkolada / cabbitaannada aan khamriga ahayn ee ka imanaya dunida reer Galbeedka, Islaamka iyo Turkiga iyo weliba cuntada degdegga ah ee muusigga tooska ah fiid kasta iyo habeen kasta. Qiimuhu waa raqiis oo kama badna € 10 qofkiiba cunno buuxda.
Volkan Balık, 1315 Sokak (U dhow magaalada hore iyo garoonka Atatürk),. Kalluun macaan iyo xarago. Jawi wanaagsan. Qurxinta qaabka kalluumeysatada qurxoon iyo kuwa fudud. ~ 35 TL / qof cunto dhan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Halkee laga joogaa Antalya
Waxaad u qaybin kartaa Antalya laba meelood oo waaweyn (illaa inta dalxiisayaasha ka welwelsan yihiin). Magaalada Hore (Kaleiçi), sida magaceeda ka muuqata, dabeecad ayaa ka buuxda oo waxay si qurux badan dib ugu soo celisay dhismayaal leh guryo martida yar iyo hudheelo hudheello qaali ah. Larada dhanka bari ee magaalada waxay leedahay hudheelo xeebta 4/5 xiddigood leh oo loogu talagalay dhammaan suuqyada loo dalxiis tago. Labaduba waa ikhtiyaarro wanaagsan, waxay kuxirantahay waxaad raadineyso. Dabcan, waxaa jira hudheelo aad u wanaagsan oo ka baxsan meelahaas, laakiin kuma jiraan cufnaanta ay leedahay Old Town / Lara.
Old Town / Kaleiçi
Waad ku dhex wareegi kartaa (boorsooyinka) mana sugi doontid muddo dheer illaa lagaa siiyo hoy 'Pansiyon' (hostel). Ku dhowaad guri kasta oo labaad oo ku yaal Old Town waa hudheel yar (inbadan oo ka mid ah oo heerkoodu aad u sarreeyo, oo leh barkado yar yar oo lagu dabaasho iyo makhaayado casri ah). Dhowr sano ka hor xagaagii hore ayaa la buuxin jiray laakiin maalmahaas waxaad moodaa inay baxeen. Qeybta ugu weyn ee soo booqdayaasha gobolkan ayaa ah xirmooyinka dalxiisayaasha ee loo maro dhammaantoodna loo dhan yahay barnaamijyada ka baxsan magaalada.
Maaddaama ku dhowaad meel kasta oo ka mid ah sicirka hoyga ee Turkiga uu sicir barar ku dhacay sannadihii la soo dhaafay. labalaabku waxay bilaabmaan qiyaastii 60 TL (xilliga fasaxa) waxaana laga yaabaa inay ka qaalisan yihiin xilliga sare (2013).
Hotelka Whitegarden / Pansiyon, Kaleiçi, Hesapçı Geçidi 9,. Hoteel fudud, nadiif ah oo raqiis ah oo ku yaal magaalada hore wuxuu bixiyaa adeeg saaxiibtinimo iyo quraac wanaagsan oo Turki ah. £ 70.
Sibel Pansiyon, Kaleiçi, Fırın Sok. 30,. Huteel aad u qurux badan oo ay leedahay haweeney Faransiis ah oo diirran isla markaana ku hadasha afafka Jarmalka iyo Turkiga. Qolalku waxay leeyihiin aircon, TV-ga dayax gacmeedka iyo musqulo gaar loo leeyahay. Waa xasilloon tahay habeenkii quraacduna waa macaan tahay. € 25.
Hoteelka Beerta Buluugga ah,. Huteel qurxoon oo leh makhaayad beer leh oo leh aragti badda, magaalada hore. Adeeg saaxiibtinimo iyo quraac aad u fiican. Wifi adag iyo Ingiriisiga sifiican loogu hadlo.
Kozan Otel, 1312. Sk. Maya. 6,. Si sax ah uma ahan magaalada hore, laakiin aad ayey isugu dhowdahay, meel xasilloon oo ay fududahay in la dhigto iyo meesha aad ka heli doonto fursado kiro baabuur. Qurxinta xun iyo shaqaalaha aan ku hadlin Ingiriisiga, laakiin raaxo wanaagsan iyo dad saaxiibtinimo leh. Ku labanlaab musqusha & AC: 80 TL.
Hoteelka Alp Pasa, Barbaros Mah. Hesapçı Sok. 30, Kaleiçi (Magaalada Hore) (100 mitir u jirta Hadrian's Gate.),. Is xaadiri: 14: 00, baadhid: 12: 00. Hoteelka raaxada leh ee raaxada ee degmada taariikhiga ah, wuxuu kaloo leeyahay makhaayad heer sare ah oo ku taal dhismaha
Hoteelka Tuvana, Tuzcular mah. Karanlık sok. Maya: 18 Kaleiçi Antalya,, fax: +90(242)241 19 81. Waxay ku taalaa magaalada duqa ah "Kaleiçi". 45 qol iyo qolal, makhaayad "Seraser" oo ku taal goobta.
At Lara, oo ah xaafad ku taal bariga Antalya, waxaa ku yaal hudheelo badan oo qurux badan oo 4/5 xiddig leh xeebta. Kuwani guud ahaan waxay qabtaan 'Dhammaan loo wada dhan yahay' safar safar fasax ah, si kastaba ha noqotee waxay sidoo kale saldhig fiican u noqon karaan kuwa doonaya inay booqdaan meelo ka fog meelaha loo dalxiis tago, laakiin fiidkii ayay ku soo laabtaan xoogaa raaxo ah. Ahaanshaha bixinta xirmo, waxay ku dambeyn karaan inay noqdaan kuwo jaban. Dhammaan hudheelada waxay ku dhacaan qaybta Splurge.
Galbeed ilaa bari:
Hoteelka Kervansaray Lara.
Hoteelka Dalxiis ee Miracle.
Delphin Diva. Hoteel qaali ah laakiin qurux badan oo si heer sare ah loogu qiimeeyo safarleyda.
Baia lara. Baia Lara waxay heshaa qiimeyn joogto ah oo tayo iyo adeegba leh.
Hoteelka Lara Beach.
Qasriga Fasaxa Boqortooyada.
Dalxiis Saturn Palace.
Hoteelka Green Palace.
WOW Kremlin Palace. Waxaa jiray cabashooyin badan oo ku saabsan amniga, amniga iyo maamul xumada halkan.
WOW Qasriga Topkapi.
Qasriga Mardan. Waxaa lagu tilmaamaa inuu leeyahay barkadda dabaasha ee ugu weyn badda Mediterranean. Sidoo kale sheegatay inay tahay meesha ugu qaalisan ee loo dalxiis tago badda Mediterranean.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Antalya
Waaxda Booliska Antalya waxay leedahay qayb "booliis dalxiis" halkaas oo socotada ka soo sheegi karaan luminta baasaboorka iyo xatooyada ama fal dambiyeed kasta oo kale, waxay noqon karaan dhibanayaal. Waxay leeyihiin shaqaale ku hadla luqado badan oo Ingiriis, Jarmal, Faransiis iyo Carabi ah.
Booliska Dalxiiska (Turizm Polisi), Kaleiçi Yat Limanı (marinada ka hooseeya magaaladii hore),, fax: +90 242 345-41-13.
Xagee loo socdaa kadib Antalya
Kemer dhanka koonfur galbeed waa gobol dhinaca dalxiiska ku caansan oo caan ku ah meelaha taariikhiga ah, nolosha habeenkii iyo hoteelada oo nus saac u jira magaalada Antalya.
Dhanka koonfureed ka sii dheer, Çıralı waa magaalo xeebeed leh dhowr meel dhexaad ah, deggan hoteels inay joogaan, oo ay ku jiraan Hotel Canada, oo leh beero saaxiibtinimo. Xeebta Cirali waa laga ilaaliyaa horumarka maxaa yeelay qoolleyda badda ayaa sanad walba yimaada xeebta si ay ukunkooda u dhigaan.
Xeebta Olimpos ee u dhow sidoo kale waa xeeb qurxoon, qurux badan. Guryaha ku yaal Olimpos ayaa ah nooc boorsooyin badan, oo leh guryo geedo badanaa caan ku ah dadka safarka ah ee da'da yar.
Demre ka sii fog galbeedka Olympos, waa goobta kaniisadda St Nicolas, oo la xidhiidha Santa Claus-ka dhabta ah (ha moogaanin taallo ka weyn tan Santa Claus ee magaalada.) Sidoo kale meel ka baxsan Demre waxaa ku yaal qabuuro dhagax weyn oo Lycian ku yaal
Kaş oo ku saabsan safarka 2 saacadood ee ka timaadda Antalya waxay noqon kartaa xulasho kale oo aad u fiican fasaxa la dheereeyey haddii aad go'aansato inaad ka cararto dadka oo dhan.
Kalkan waxay nus saac u jirtaa galbeedka Kas. Magaalo xeebeed qurux badan lehna wadooyin qurxoon iyo makhaayado tayo sare leh. U dhow Patara waxay leedahay xeebta ugu fiican ee dahabiga ah ee xeebta Mediterranean, waana la booqan karaa xitaa haddii aadan halkaas joogi doonin.
Gobolka Antalya wuxuu leeyahay qaar ka mid ah burburka Roomaanka ee ugufiican wadanka, oo ay kujiraan Perge iyo Aspendos, oo leh tiyaatarka Roman ee ugu weyn uguna wanaagsan.
Belek dhanka bari waxay caan ku tahay xiriiriyeyaasha golf-ka iyo hudheelada raaxada.
Manavgat qiyaastii 1 saac dhanka bari baabuur ahaan. Waxay hoy u tahay biyo-dhacyada wanaagsan ee Manavgat, oo dhowaan la casriyeeyay.
Bariga ka sii fog, Side waa meel xeebeed loo dalxiis tago oo qurxoon oo Roomaanku aad u ilaaliyo.
Alanya dhanka koonfur bari waa goob dalxiis caan ah oo 2 saac u jirta.
Termessos - burburkii magaalo qadiim ah oo ku taal meel qurux badan oo ku taal buuraha Taurus ee gudaha kaymaha geedaha
Tareenada iyo basaska ayaa yimaada xarunta safarka ee Denizli. Halkaas, dolmus wuxuu kaa qaadayaa 10 mayl ama wax u dhow Pamukkale.
Inta lagu jiro xilli sare, basaska waxay toos uga baxaan xarumaha dalxiiska oo ay ku jiraan Istanbul, Ankara, Fethiye, Bodrum, Marmaris iyo Selçuk.
Haddii aad rabto madaxa waqooyiga by hitchhiking, raac basaska yar ee dadweynaha # 25 ama # 57 oo istaaga boosteejooyinka basaska magaalada ee u dhow otogar. Khadadkan basaska ah waxay kuu qaadayaan isgoys weyn oo ay ku yaalliin nalalka taraafikada ee magaalada ka baxsan, oo ku dhex taal kaynta geedaha. Isgoyskani ma aha joogsiga ugu dambeeya ee hubso inaadan seegin joogsiga halkaas ku yaal. Fare: 1.35 TL / qof.
Hoteelka Alva Donna Exclusive & Spa Antalya
Hoteelka Antalya Palace
Ugu Fiican Western Plus Khan Hotel Antalya
Huteelka Sare ee Bilem Antalya
Hoteelka Chervo Club Sirena Antalya
Naadiga Capa Hotel Antalya
Hoteelka Naadiga Antemis Antalya
Concorde De Luxe Resort ee Antalya
Hotel Crystal Deluxe Kemer Antalya
Hotelka Crystal Paraiso Verde Antalya
Dedeman Antalya Hotel & Xarunta Shirarka
Hoteelka Divan Antalya Talya
Hotel Divan Cukurhan Antalya
Hoteelka Erdem Antalya
Deganaanshaha Caannimada Kemer
Hoteelka Fantasia Kemer
Goobaha Dalxiiska ee 'Gloria Serenity Resort Antalya'
Dalxiiska Gloria Verde
Hoteelka Dahabka ah ee Dahabka Antalya
Dalxiiska Greenwood ee Antalya
Hoteelka Xeebta Xeebta ee Antalya
Hotelka Hera Park Antalya
Hoteelka Belport Beach Antalya
Hoteelka Camyuva Beach Antalya
Naadiga Hoteelka Barbarossa
Naadiga Hoteelka Delfino
Naadiga Hoteelka Lagonya Beerta Antalya
Naadiga Hoteelka Xanthos Kalkan
Hoteelka Crystal Aura Beach Resort & Spa Antalya
Hoteelka Deja Vu Antalya
Hoteelka Elit Side Antalya
Hoteelka Goldcity Antalya
Hoteelka Hadrianus Antalya
Hoteelka Hera Kas
Hoteelka La Perla Resort Kemer
Hoteelka Lara Beach Antalya
Hoteelka Melissa Garden Antalya
Hoteelka Mucjisada ee Dalxiiska ee Antalya
Hoteelka Papillon Ayscha Antalya
Hotel Antalya ee Paris
Hoteelka Reutlingen Hof Antalya
Hoteelka Zel Antalya
Hoteelka Madaarka IC Antalya
Huteelka Kervansaray Kundu ee Antalya
Hoteelka Kristal Beach Antalya
Hoteelka Magaalada Latanya Antalya
Qasriga Mardan Antalya
Meder Resort ee Antalya
Hoteelka Farshaxanka ee Mediterranean Art Antalya
Huteelka Oscar ee Antalya
Degganaanshaha Beerta Wabiga Antalya
Hoteelka Santamarina Antalya
Hotel Sea Life Resort Antalya
Toddoba Xiddig Gaar Ah Hotel Antalya
Ku bilow Otel Hotel Antalya
Deegaanka Tekeli Konaklari Antalya
Xeebta Titanic & Resort De Luxe Hotel Antalya - Lara
Fasalka Gaarka ah ee Tuvana Hotel Antalya
Dalxiiska Tayada Vikingen Alanya
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Turkiga > Tilmaamaha Safarka Antalya Halal
Hagaha Socdaalka ee Koblenz Xalaal